Izany no mahatonga ny Siri for Apple TV voafetra amin'ny firenena valo | Vaovao IPhone
Mpampiasa Apple mihoatra ny iray no gaga (sy maharikoriko) ny zava-misy Siri for Apple TV dia voafetra amin'ny firenena valo amin'ny famoahana azy voalohany. Ity dia hetsika somary hafahafa nataon'ny Apple, ary bebe kokoa raha heverintsika fa amin'izao fotoana izao dia misy ny mpanampy ny feo iPhone any amin'ny firenena 29 ary tsy misy olana ny fiasa ao aminy.
Siri ho an'ny Apple TV dia misy amin'ireto fiteny sy firenena manaraka ireto izao: anglisy (Etazonia, Kanada, Angletera ary Aostralia), español (any Espana ihany amin'izao fotoana izao), alemaina (Alemana), frantsay (France sy Canada) ary Anarana (Japon). Raha heverina fa Siri amin'ny iPhone dia misy amin'ny faritany maro kokoa, maninona no tsy izany no nitranga tamin'ny Apple TV?
Araka ny navoakan'ny mpanelanelana MacPrime, rehefa avy nanao andiana dinidinika nifanaovana tamin'ny mpitantana niasa tamin'ny Apple TV vaovao, noho ny antony "phonetic" daholo izany.
Ny iray amin'ireo lahasa lehibe an'ny Siri amin'ny Apple TV dia ampio izahay hahita sarimihetsika sy mpilalao sarimihetsika, saingy indrisy fa ny lohatenin'ireo sarimihetsika ireo sy ny anaran'ireo mpilalao dia miovaova arakaraka ny firenena misy antsika, izany hoe ny amerikana dia tsy manonona "Titanic" mitovy amin'ny Espaniôla ohatra. Sarotra ny toe-draharaha raha jerentsika fa any amin'ny firenena sasany dia miova ny lohatenin'ny horonantsary rehefa voadika amin'ny fiteny eo an-toerana.
Avy amin'i Apple dia efa miasa izy ireo manitatra Siri amin'ny Apple TV ho an'ny faritany vaovao haingana araka izay tratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » Izany no mahatonga ny Siri for Apple TV voafetra amin'ny firenena valo
Efren morales dia hoy izy:
Avy eo izy ireo dia tokony hivarotra ny fotony mandra-piasan'ny tsara.
Valiny tamin'i Efren Morales
Miaraka amin'izay foana isika ... iza no tsy tia hoe tsy mividy izy, tsy misy terena mividy vokatra !!! tsy tianao? aza mividy ... tsy tiako ny telefaona misy android ary tsy mieritreritra ny hividy azy akory aho izao ... izao hilazana fa Android koa dia loto, tsy tiako fotsiny ary tsy ividianako azy !!! Betsaka loatra ny olona manohitra an'i Apple ary toa ny "tiako ary tsy afaka aho ary izany no antony itsikeraiko." Aza mandany ny fotoananao ... raha mila iPhone ianao dia vidio dia vidio, dia ho sambatra kokoa ianao noho ny mitsikera, minoa ahy
Te hanana aho nefa tsy afaka?, Paoma tv ?. Aza mampihomehy, io ihany no azon'ny olona manambady lazaina rehefa tsy te hanaiky izy ireo rehefa manilika azy ny tena marika. Vakio tsara, ny voalohany izay maniry ary tsy afaka dia izay milaza azy voalohany. Nofinofy mahafatifaty
Elchuy dia hoy izy:
Ary inona ny loto anananao?
Valiny tamin'i Elchuy
Mipetraka any Frantsa aho ary androany vao nividy ilay Apple TV vaovao, raha vao namboariko tamin'ny teny Espaniôla avy any Espana hitako fa tsy mamela ahy hampiasa Siri izy io, toa voasakana izany, ny fomba tokana hampiasana azy dia ny fametrahana azy amin'ny teny frantsay , olon-kafa ve no efa nandalo?
Manana olana mitovy amin'izany aho, monina any Marseille aho ary tsy avelako hametraka izany amin'ny Siri, amin'ny teny frantsay ihany. Tsy olana izany fa manelingelina ahy ihany